Jiisyada rocamadours ee riyaha saliida madow ee truffle - VIP Truffles
Bogga ugu weynRocamadours farmaajo oo leh saliid truffle madow
6 jiisis rocamadour ari ah
5 sentilitir oo saliid saytuun ah oo ku jira juice truffle
5 basbaas berry
Kuleyli foornadaada ilaa 180 ° C.
Gali jiiska ariga ee 'Rocamadours' ramekin qiyaastii 15 sentimitir oo ballaciisu yahay.
Kadib ku dar saliida iyo basbaaska.
Dubo 10 daqiiqo at 180 ° C.
Foornada dibedda, waxaad ku rushaysaa qanjaruuf 'fleur de sel' oo leh qashin madow.
Ku darso rootiga la dubay ama xabbo rooti ah si aad u quusato.
"Nooca" Tapas-style "truffle omelet madow
Tapenade oo leh saliid dhalo madow '